Caccafubbate nna haawiittimmootu nna shaete garira gadete qineessuba badanno. Qoleno hadhanno nna surkantanno caccafootira nna haawiittimootira margeessu hornyuwa badanno. Ledote tajera Kiboorde horoonsidhe shaubba muccisi LibreOffice Borreessaanchi Kaa'lo giddo lai.
Borrote bortajubba giddo baala haroote kalaqantino shaubbara gadubba tiranno.
Mittu mittunku qooli aana wirro ledi
Beekkooti (HTML giddo ikkikkinni)
Shaubbate giddo eo
Kiirote afanshi malaatisama hoogiro, kiirra borrote suudishshi giddo suuqantino nnauminsanni guraanni-dirantino.
Kiirote suudishshi afansha
Suwashsho suudisamme Diramme barenni di"irkidhanno. Bisiccote amadubba suwashshu garinni mereeroho diranturo, Insano borro woy kiirra mereeroho gattanno.
Kiboordetenni haawiittimmoota nna caccafoota harisate gadete qineessubba tiranno.
Kiboordetenni haawiittimmoota nna caccafoota surkate gadete qineessubba badanno.
Aantino haawiittimmooti woy caccafooti qoleno giddo shae aana hawiittimmootaho woy caccafootaho boode heleelle gumulanno.